Ukhuvethe luphoqa izinguquko emingcwabeni yaboHlanga - Bayede News
Isithombe: nguSumaya Hisham
Ugingqigongqo wedemokhrasi ubuyise ezindala eMalawi
Abebeluthatha kancane ukhuvethe ngiyacabanga ukuthi balubuka ngamanye amehlo uma seluphoqa izinguquko ezintweni ebesesizithatha njengengxenye yempilo yethu, sibona ukuthi ngeke ibe khona impilo ephelele ngaphandle kwazo. Ezinye zalezi zinto ziqala zithathwa njengesiko, kungene ububhizinisi nobuntandakubukwa neminye imifakela yenze kube sengathi konke kumele kuhambe ngalowo mgudu osewakhiwe. Ngineqiniso ukuthi kuzwela kakhulu kubanikazi bamabhizinisi okungcwaba kulesi sikhathi sokhuvethe ngoba kunciphisa okuningi okukhokhelwayo okuxhantela ekuhleleni umngcwabo womuntu. Ngiyabona futhi ukuthi kunika aboHlanga umzuzu wokuzibuza ngezinye zezinto esizenza kube sengathi ziwumthetho.
Empilweni yamanje sihlanganyela nezinhlanga ezahlukene emsebenzini, kujwayelwane kuhlanganyelwe emicimbini ehlukahlukene, noma kunemingcwabo kube nokukhombisa ukuzwelana. Kwezinye izinhlanga, ikakhulukazi abadabuka kwelaseNdiya, kuyaye kushiye imibuzo kwaboHlanga ukuthi bakwenza kanjani ukuba kuthi umuntu eshone ekuseni lishone ilanga esefihliwe. Akulindwa muntu ongekho. Uma umuntu eshone ekuseni ufihlwa ngalelo langa, kanti uma eshone sekusemini kuyalalwa afihlwe ekuseni ngakusasa. Sihlale sibezwa aboHlanga bezwakalisa ukumangala ngalokhu ngoba aboHlanga bazinika isikhathi eside, kwesinye isikhathi esisondela emasontweni amabili kusenziwa amalungiselelo, kulindwe nabasebenza kude. Sekuze kube sengathi yisiko leli lokulinda kanti sekunemikhuba exhantele esikweni.
Selokhu kuhlasele ukhuvethe kuminyene utshumo. Kuyadabukisa ukubona indlela ephuthumayo imingcwabo ehlelwa ngayo, kubalekelwa ukuthelelana ngokhuvethe, ikakhulukazi uma kungumuntu oshone ehlaselwe yisifo esiphathelene nokhuvethe. Nemingcwabo yabashone kungahlangene nokhuvethe iyaphuthunyiswa kulezi zinsuku. Lokhu kuphuthuma kwenza kube nokuzibuza kwabaningi ukuthi yikuphi okuyisiko laboHlanga, yikuphi okuwumkhuba endleleni ejwayelwe ngaboHlanga yokuhlela umngcwabo.
Sekucishe kube yinto eyaziwayo neyamukeleke kwabaningi ukuthi kwaboHlanga isikhathi sokungcwaba othandiweyo wabo, yisikhathi sokukhombisa ngezindlela ezithile ukuthi bebemthanda lowo osebashiyile. NgokwaboHlanga umngcwabo ungumcimbi ophelele ohlelelwa kahle, kungaphuthunywa, kuthengwe ukudla okuzodliwa ngezinsuku kusalindiwe, nalokho okuzodliwa ngelanga lomngcwabo. Kuyaye kufunwe ihholo noma inkundla engakwazi ukuthatha abantu abaningi, ihlotshiswe, kube nezimoto zikanokusho ezizothwala lowo ozongcwatshwa nezinye ezizothwala umndeni. Abanye basika ingqephu entsha abayigqoka ngosuku lomngcwabo.
Sengike ngezwa abaningi boHlanga benemibuzo yokuthi sisahamba emgudwini yini thina boHlanga. Lokhu bakusho bebuka izinto eziningi ezixhantela ekuhlelweni komngcwabo, ezinye zazo ezigcina zithathwa njengezinto eziyisidingo ekuhleleni umngcwabo.
Indlela umngcwabo ohlelwa ngayo igcina ivula ithuba kwabanamabhizinisi okungcwaba ukuthi bazenzele imali ngokungcwaba umuntu. Ukukhokha kuqala ngomshuwalense noma umasingcwabisane, lapho kudingeka kukhokhwe imali ethile inyanga nenyanga. Kunezinkampani zomshuwalense ezingavala uma kungase kuqhubeke imingcwabo isetshenzwe ngendlela ukhuvethe oluyiphoqayo.
Njengoba kunokhuvethe kunemithetho evimba ukuba kudliwe emicimbini ehlanganisa nemingcwabo. Izindleko zomngcwabo zehle ngendlela eyisimanga. Phela ukudla kuqala ngosuku okushonwa ngalo, abazobona banikezwe itiye neziphuzo ezihambisana namakhekhe. Lokhu kuqhubeka usuku nosuku kuze kube kuyangcwatshwa emva kwezinsuku ezingaphezulu kwesithupha. Uma sesikwenza sizinikeza isizathu sokuthi kuyinqubo yaboHlanga ukupha umuntu ongena ekhaya. Kuthi ngosuku lomngcwabo abantu bathi uma bebuya emathuneni bafike kudekwe amatafula, bame emugqeni baze bayofika etafuleni elinokudla. Kunalabo ababuya beze kodla ngoba besaba ukuthi kuzothiwa bayaqhenya, kanti abanye basuke bevela kude. Ngalesi sikhathi esikuso esingase sithathe iminyaka emibili noma ngaphezulu, akukho ukuphekela abantu abaningi. Umthetho ohambisana nokhuvethe awukuvumeli ukulungiswa kokudla ethile kwenzelwe abantu abaningi. Phela nesibalo sabantu abeze emngcwabeni sime emashumini amahlanu kuphela. Kweminye imizi leso sibalo sakhiwa wumndeni uwodwa.
Abangcwabi banezindawo zamakhaza lapho kugcinwa khona isidumbu. Ukugcina isidumbu emakhazeni kubalwa imali usuku nosuku. Kulesi sikhathi akwenzeki ukuba isidumbu sigcinwe isikhathi eside. Lokho kunciphisa izindleko emndenini oshonelwe, kodwa ngakolunye uhlangothi kuyabalimaza abangcwabi. Uma umuntu eshone ngokuphathelene naleli gciwane, ugcinwa isikhathi esifushane kakhulu, kanti futhi umndeni awubi nakulawula ukuhlelwa komngcwabo ngendlela ofisa ngayo.
Ukuhlaba inkomo kufike abantu abaningi beze kokudla inyama akwenzeki kulesi sikhathi ngoba kunemidanti eminingi okumele ilandelwe, ukuze kungathi emuva komngcwabo kuphume izidumbu ngenxa yokuthelelana ngokhuvethe.
Kusizumile lokhu okwenzekayo, ikakhulukazi thina boHlanga. Ubuhlungu obukhulu ngobokuthi akukho ukuhlela ngendlela ejwayelekile. Sengizwe emindenini eminingi eshiywe yizihlobo kulesi sikhathi iziduduza yethembisa ukuthi umcimbi wokukhumbula ilungu lomndeni uyokwenziwa uma isimo sesibuyele endaweni. Umbuzo ofikayo yilowo othi kazi kuyokuba ngemva kweminyaka emingaki, futhi umndeni uyokube sewulahlekelwe ngamalungu amangaki.
Mhlawumbe yisikhathi esihle lesi sokuzihlola thina boHlanga ukuthi yiziphi izinto ezisemqoka ekuhleleni imingcwabo. Ziningi izindleko engingazibalanga kulo mbhalo, okungathi uma sibhekisisa sibone ukuthi singazishiya ngaphandle, kodwa odlulile emhlabeni aphelezelwe ngesizotha. Okuhle ngalokhu esibhekene nakho akekho umuntu esingamkhomba sithi nguye ofike nalolu khuvethe, nokuthi nguye oguqule impilo ebesesiyithanda.
nguLindani Dhlomo Jul 13, 2020